HORDHAC: Chelsea vs Arsenal…(Semi Final ka Carabao Cup) – Gool FM
HORDHAC: Chelsea vs Arsenal…(Semi Final ka Carabao Cup)
Byare January 10, 2018
(England) 10 Jan 2018. Chelsea ayaa caawa Stamford Bridge ku marti galin doonta Arsenal kulanka loo yaqaano London Derby.
Waa lugta hore ee wareega afar dhammaadka Carabao Cup.
Eden Hazard ayaa taam u ah inuu wajaho Arsenal lugta hore ee Semi final ka Carabao Cup kaddib markii uu kasoo kabtay dhaawac kubka ah.
Saxiixa cusub ee Chelsea Ross Barkley ayaan la heli karin maadaama uu weli ka soo kabsanayo dhaawac muruqa ah.
Tababare Arsene Wenger ayaa isagu kulanka ku seegaya ganaax saddex kulan oo la dul dhigay kaddib markii uu saluugay go’aanka garsoorayaasha.
Granit Xhaka oo qaba dhaawac gumaarka ah iyo Shkodran Mustafi oo qaba jug ayaa shaki laga muujinayaa taam ahaanshahooda kulanka waana la qiimeyn doonaa xaaladooda.
Muuqaalka caawiya Garsooraha ee (VAR) ayaa loo isticmaali doonaa labada lugood ee Semi Final ka iyo xitaa Final ka.
Kulanka: Chelsea vs Arsenal (Afar Dhammaadka Carabao Cup)
Goobta: Stamford Bridge
Goorta: 11:00 Habeenimo
Chelsea ayaa adkaatay afar ka mid ah Shantii kulaka ay League Cup la ciyaartay Arsenal oo ay ka mid tahay Semi-final ay cagta sii marisay (Isku cel celis 4-3) iyadoona ku guuleysatay koobka 1997-98.
Arsenal kulanka kaliya ay ka gudubtay Chelsea tartankan ayaa ah guul ay Highbury ugu gaartay wareega afaraad xilli ciyaareedkii 1976-77.
Gunners ayaa adkaatay kaliya hal kulan (5-3 kulan Premier League oo la ciyaaray October 2011)sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay ay soo booqato Stamford Bridge dhammaan tartamada.
Blues ayaa ka soo gudubtay afar ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeeyay Semi Final ka League Cup (2005, 2007, 2008 iyo 2015) kaliya hal ayay ku guul darreysatay waxaana ka adkaatay Swansea in 2012-13 kolkaa uu hogaaminayay Rafael Benitez.
Kulanka ayaa noqon doona kii 15-aad ay Arsenal ciyaarto Semi Final ka League Cup, kaliya Liverpool (17) ayaa ciyaartay in ka badan.
Yeelkeede, Arsenal ayaa ah kooxda ugu badan ee lagu soo reebo Afar dhammaadka tartankan (7-jeer), halka Gunners ay guul darreysatay shan ka mid ah Todobo Final ay ciyaartay markii ay ka soo gudubtay Semi Final ka.
Chelsea ayaa goolal laga dhaliyay 90-ka daqiiqo kulan kasta oo ka mid ah saddexdkii kulan ay Carabao Cup ciyaarta xilli ciyaareedkan laakiin sidoo kale Blues ayaa iyana daqiiqadii ugu dambeysay gool dhalisay labo jeer (Everton vs Bournemouth).
Arsene Wenger ayaa labo jeer gaaray Final ka League Cup intii uu xilka u hayay Arsenal (2007 iyo 2011), laakiin waa koobka kaliya uu weli ku guuleysan tartamada laga ciyaaro gudaha Ingiriiska.
Arsenal kuma aysan guuleysan koobkan 25-sano halka Chelsea ay markii ugu dambeysay qaatay 2015.
Safafka Macquulka ah ee Chelsea vs Arsenal:
''Zidane waxaa garsooraha kusoo jeediyay Wiltord'' - Willy Sagnol oo xagal cusub ka galay hertidii Zidane ee Materazzi!!
HORDHAC: Real Madrid vs Numancia...(Lugta 2-aad ee wareega 16-ka Copa del Rey)